မြတ်လေးငုံ: ဒါလားဟေ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး တို့မယုံဘူး လို့တောင်ပြောလိုက်ချင်တယ်ရှင်.။
ဒါလားဟေ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး တို့မယုံဘူး လို့တောင်ပြောလိုက်ချင်တယ်ရှင်.။
ကဲ.. ဒီလိုပြောလို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မညီ ၀တ်ဆင်ကြတယ်ဆိုတော့ ဒါဆို ကျွန်မတို့က ထမီနဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီဝတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြရမှာလား လို့ဆိုဖွယ်ရာရှိပါတယ်၊
သို့သော် ခေတ်နဲ့အညီဝတ်စားတာကို မတားမြစ်ပါဘူး။
နောက်ဆိုရင် ထမီဆိုတာတောင် ဘယ်လိုမှန်းသိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး..
အရင်တုန်းက မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ထမီပြင်ဝတ်ရင် လူမရှိတဲ့ဘက်ကို လှည့်ပြီးလုံခြုံသေသပ်စွာနဲ့ဝတ်ပါတယ်၊၊
အဲ့ဒါကိုများ ခိုးကြည့်မိရင် နှာဘူးကြီး ဘာကြီးဆိုပြီးတော့ မျက်စောင်းပေါင်းများစွာအထိုးခံရပါတယ်၊၊
အဲလောက်ထိ နဂိုခေတ်ကမိန်းကလေးများ အိနြေ္ဒသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတာပါ..
ခုတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး၊၊ ဟိုနားဖော် ဒီနားဖော်နဲ့၊၊
တစ်ချို့ဆို ပေါင်အထက်မှာဝတ်တယ် ၊၊
သူတို့ကိုသူတို့တော့ ခေတ်မှီတယ်ပေါ့ ဆိုလိုချင်တာက၊ ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယို သရုပ်ဆောင်များက ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ လုပ်နေကြတာလဲ ပါပါတယ်၊၊
၊တွေ့သမျ­ှမိန်းကလေးတွေကို ကိုယ့်မြန်မာအမျိုးသမီး လေးတွေပါလား ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ချက်တင် လောကထဲက ဆွဲထုတ်ရမဲ့အစား၊ ပိုပြီးနစ်အောင် နှစ်နေတဲ့ သူတွေက တစ်ပုံကြီးပါ၊၊
တစ်ချို့ဆို ရည်းစားထားပြီး ဟိုပစ္စည်းမှာ ဒီပစ္စည်းမှာနဲ့ ယောင်္ကျားကြီးတန်မဲ့ ပိုင်းလုံးလုပ်နေတာတွေ သိပ်ပြီးရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ် ။
သိပ်ပြီးအောက်တန်းကျပါတယ်၊၊လက်တော့ မှာတဲ့သူနဲ့ ၊ ဖုန်းမှာတဲ့သူနဲ့ ၊၊ ပါးရိုက်သတ် ဖို့ကောင်းတယ်၊၊
တစ်ချို့ကတော့ မိန်းကလေးတွေကို ပထမခင်အောင်ပြောတယ်..
ပြီးရင် sexyword တွေကိုလှည့်ပတ်ပြောပြီး မိန်းကလေးများစိတ်ပါအောင် ကြံဖန်ပြီး ပြောတယ်။
လူတစ်ယောက်ချက်တာကိုဘေးကနေနားထောင်နေတာ သူတို့မှာအွန်လိုင်းကနေ မိန်းမတွေကော ကလေးတွေတောင် လေနဲ့ရနေကြပါပီ။
နားကြပ်ကြီးတွေ တပ်ပြီး တစ်နေကုန် ဖင်ပူအောင်ထိုင်၊ တွေ့သမျှ ဆန့်ကျင်ဘက်(gender ) များနဲ့ချက် နေလိုက်ကြတာကို လေယဉ်မောင်းနေတဲ့ ပိုင်းလော့ကြီးတွေ ကျနေတာပဲ၊၊
တစ်ချို့ဆိုရင် အဲ့ဒီ INTERNET ဆိုင်ကရောင်းတာကိုစားပြီး တစ်နေကုန်ထိုင်ချက်ပါတယ်၊၊
လက်တွေ့ နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနေရတာတွေရှိပါတယ် နင့်ကို ကြိုက်တဲ့အချိန်ဖွင့်၊ အမြဲတမ်း အွန်လိုင်းပဲ၊၊
ပြီးရင် စကားကို အကောင်းမပြောဘူး၊၊
တချို့ဆို Q တယ်လို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်..
ကောင်လေးတွေဆိုလည်း ကောင်မလေးတွေကို လိုက်Q နေကြပါတယ်..
ကောင်မလေးတွေဆိုရင်လည်း အဲဒီQ တာကိုပဲခံနေကြပါတယ်.. ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ၊၊
၊အချိန်တွေ ၊ အင်အားတွေ ဘယ်လောက် နှမြောစရာ ကောင်းလိုက်သလဲ ၊၊
ရှက်သင့် ကြပါပြီ ၊ ပြင်သင့်ကြပါပြီ ၊
တစ်ချို့သော မိန်းကလေးတွေဆိုရင် အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲ ချက်တင်ကို အစွဲကြီးစွဲပြီး ချက်တင်ဆိုတဲ့နွံထဲမှာ နစ်နေတာတွေ အများကြီးပါ၊၊
အဲ့လိုလူမျိုးတွေကို မြန်မာအမျိုးကောင်းသားသမီးတွေရှောင်သင့်ပါတယ် ..
မိန်းကလေးများအနေနဲ့၊၊ သို့သော် ပြောသာပြောရတာပါ ။ အဲ့လိုပြောစားလာတဲ့ ယောက်ျားတွေကလဲ သဘာကရင့်နေပါပြီ ။
ပြီးတော့ မိန်းကလေးတွေကလဲ အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေကိုမှ ပိုပြီးကြွေသလားတော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့ ....
တစ်ချို့သော အမျိုးသမီးများ၏ ဟာလာဟင်းလင်း ဓါတ်ပုံပေါင်းများစွာဟာ လည်း အင်တာနက်မှာ မမြင်ချင်အဆုံးပါပဲ..
တော်တော် အရှက်နဲတဲ့ မိန်းမတွေပါ VZOကနေတစ်ဖက်က ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ကို မျိုးစုံ လုပ်ပြပါတယ် ...
ဒါတွေက ယောင်္ကျားလေးတွေကိုယ်တိုင် ၀န်ခံကြတာပါ..
တချို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အရှက်နည်းမှုတွေကို ဝေဖန်ကြတာပါ..
အဲ့ဒါလား မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီး တွေ ဆိုပြီးတော့ ဒီလိုခေတ်ကြီးထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင် သမီးမိန်းကလေးမွေးဘို့ တော်တော်လေး ကိုစဉ်းစားနေရတာပေါ့..
အဲ့တော့ မြင့်မြတ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးကောင်းများအနေနဲ့ အဲ့လိုပုပ်နေတဲ့ ငခုံးမတွေ(မိန်းမများ)ကိုလဲရှောင်ကြဉ်ပါ ၊၊
အလွန်သိက္ခာရှိပြီး လေးစားဖွယ်၊ဂုဏ်ယူထိုက်သော့ မြန်မာ အမျိုးသမီးကောင်း များစွာ၊အမျိုးသားကောင်း များစွာ ရှိပါသည်၊၊
မြန်မာနိုင်ငံကို ဘက်စုံမှာတိုးတက်စေဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ အတွက်က ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့မပတ်သက်မိဖို့ လိုပါတယ်...
်forward မေလ်းမှ ဖတ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, June 25, 2011
မိုးကောင်းမြို့နယ်မှ မိန်းကလေးနှစ်ဦးအား တရုတ်ပြည်သို့ရောင်းစားသည့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ - မိုးကောင်း ဇူလိုင် ၂၂ ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ်မှ မိန်းကလေးနှစ်ဦးအား တရုတ်ပြည်သို့ ရောင်းစားခဲ့သည့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား ဇူလိုင်၂၂ရက်က မိုးကောင်း...
တပ်မတော်နှင့် RCSS တိုက်ပွဲများ လျှော့ချရပ်တန့်နိုင်ရေး ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်စာချုပ်များ ပြန်လည်သုံးသပ်မည် - တပ်မတော်နှင့် RCSS တိုက်ပွဲများ လျှော့ချရပ်တန့်နိုင်ရေး ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်စာချုပ်များ ပြန်လည်သုံးသပ်မည် .အောင်ဇော်ထွန်း Sunday, July 22, 2018 အ...
NTDV ရုပ်သံဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ေ...
ဒါလားဟေ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး တို့မယုံဘူး လို့တောင်ြေ...
ပလက်ဖောင်းဈေးသည်အဖြစ် ဘာကြောင့်သူတို့ ရပ်တည်နေကြရ...
တရုတ်ထိလျှင် မချိအောင်နာတဲ့ မြန်မာအစိုးရ
မန္တလေး ဗုံးပေါက်ကွဲ (ရုပ်သံ )
ဇွန်လပညာသင်နှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ အလံသစ် ဘယ်က ခိုးယ...
မြန်မာပြည်မှာ သိန်းစိန် ဗုံးတွေတော်တော်ပေါ နေပါလား...
မျက်စေ့မမြင်သူကြားများထဲက ခံစားချက်တွေကို ရသမြောက်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနား (ကိုရီးယား ...
မနေ့ညနေပိုင်းက အမေစု အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာ ပြုလုပ်တ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်ရုံးတွင် ယနေ့ ပြောကြ...
ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ရှင် ကျမတို...
သြစတေးလျနိုင်ငံ မယ်လ်ဘုန်းမြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဒေါ်ေ...
Happy Birthday ပါ ဖွားဖွားစု !!!
AYARWADY (ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီး)